Ikhaya elihle e-Zman eline-WiFi namakamelo okulala ayi-6
Leli khaya elihle leholide eliyitshe liyisinqumo esihle salabo abafuna ukuthula nokuthula eNyakatho Dalmatia. Itholakala edolobhaneni laseZman, elitholakala esiqhingini saseDugi Otok. Lesi siqhingi saziwa ngezivini zaso, izinsimu zezithelo kanye nokuba seduze kweZadar, okuyindawo ecishe ibe yi-12km. Ikhaya linamayunithi okuhlala amathathu, aqinisekisa ukuthi lilungele imindeni emikhulu noma iholide nabangani. Ithala elikhulu liyindawo enhle yokuphumula nokuzijabulisa, futhi lihlanganisa izindawo zokosa inyama kanye nedamu lokubhukuda elingaphandle. Ugu olusenyakatho lunokukhethwa okumangalisayo kwamabhishi amahle alindele ukuhlolwa.
Amabanga: indawo yokuhlala eseduze 30 m / shopping 50 m / restaurant 100 m / idolobha eliseduze (Zadar) 12 km / amanzi(Stone/Pebble beach) 100 m
Hlola ezinye izinketho ezise- Zman namaphethelo